Archive du 18-févr-2022
Tabera Randriamanantsoa “Voalohany tamin’ny fitondrana tsy misy ilàna azy ity”
Mijoro manatanteraka ny asan’ny mpanohitra ny RMDM, hoy ny filohan’ny antoko politika Kintana, Tabera Randriamanantsoa, omaly. Manome soson-kevitra ho an’ny firenena koa,
Mitaky ny fandravana faran’izay haingana ny governemanta ny mpanohitra. Tsy izy ireo irery moa izany fa hery politika maro tsy hanavahana no hita nanao izany tato ho ato.
FANAMBARAN’I ETAZONIA “TSY NISITAKA IZANY NY TAFIKA ROSIANA”
Lavin’ny Maison Blanche ny filazan’i Russie fa nanala ny miaramilany tany amin’ny sisin-tany manakaiky an’i Ukraine. Miaramila 7000 no napetraka ary efa tonga any an-toerana ny sasany hanatevin-daharana, hoy ny Bekintana.
Fakana an-keriny zanaka Karana 400 000 euros ny vola notakiana, 7 voasambotra
Olona miisa 7 hatramin’ny omaly no efa voasambotra mikasika ilay raharaha fakana an-keriny zanaka karana vao 3 taona monja teny Ambodivonikely Ambohimanarina niseho ny 07 febroary lasa teo.
Fizarana fanampiana hafahafa Sao mba misy ambadika famaizana an’Ikongo ?
Sady mampalahelo no mahamenatra, saingy izay tokoa angamba ilay hoe: “miaina amin’ny zava-misy”. Izay no azo hamintinina ny fizarana fanampiana tany Ikongo.
Maka Alphonse - CFM « Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy fitoniana »
Naneho ny heviny mikasika ny toe-draharam-pirenena eto Madagasikara sy ny olana iainan’ny CFM ny filohan’ny filankevitra ny fampihavanana Malagasy Atoa Maka Alphonse.
Toetry ny andro Ahiana hahery vaika ny rivodoza Emnati
Nivadika ho rivodoza omaly maraina ilay andro ratsy tao amin’ny ranomasimbe Indiana ka nomena ny anarana hoe “EMNATI”. T
Rodoben’ny mpanohitra “Ravao faran’izay haingana ny governemanta”
Ravao faran’izay haingana ny governemanta, hoy ny avy eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM, tetsy amin’ny foibeny etsy Bel’air omaly.
Jean Claude Rakotonirina “Tena voa mafy i Mananjary”
Nanampy trotraka ny fahasahiranam-bahoaka ny vokatry ny rivodoza, izay loza voajanahary nefa raharaham-pirenena tsy maintsy hatrehina,
Fitantanana ny firenena Diso fanantenana amin-dRajoelina ny tanora
Maro tamin’ireo tanora izay tafaresaka taminay no naneho ny heviny mikasika ny fitondrana misy amin’izao izay tantanin’ny filoha Andry Rajoelina.
Savorovoro tany Nosy Varika Tezitra ireo traboina, nirefodrefotra ny basy
Raikitra ny sakoroka tany Nosy Varika omaly. Tezitra mafy ny vahoaka traboina ka nitokona niandry sy nitaky ny voalaza fa anjara fanampiana ho azy vokatry ny fampanantenana nataon’ny Mpitondra.
Madagasikara Hisokatra tsikelikely ny sisin-tany
Mandeha ny fanitarana tsikelikely ny fanokafana ny sisin-tanin’i Madagasikara. Nanambara ny Minisiteran’ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro fa mihetsika amin’ny fihaonana sy fifampidinihana teknika
Fihazakazahana maka vatsy tsinjo Nahitana taratra ny fahasahiranam-bahoaka
Tena sahirana ny vahoaka Malagasy. Raha vantany vao nahare fanomezana kely na avy amin’ny fanjakana na tsia dia samy mihazakazaka mamono tena avokoa sitrany ahay mahita indray mandeha mandrotsaka.
Mangarahara – Mandritsara Zaza 9 taona maty natelin’ny rano
Nisahotaka ireo mponina rehetra manodidina ny tetezana Mangaraha ao Mandritsara rehefa naheno fa mpianatra izay vao rava nianatra no nilomano tao amin’ny renirano io no tsy hita popoka.
Antananarivo Olon-dratsy 88 no voasambotra tao anatin’ny 2 andro
Manatanteraka ilay “opération coup de poing” ny polisim-pirenena amin’izao ho enti-miady amin’ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra.
Distrikan’Ambositra Hametrahana indostria mpanodina voatabia
Ambositra no distrika fahatelo aorian'i Betafo sy Ambatondrazaka hanodinana ny voatabia ho lasa fihariana haingana sy maharitra.
Fifandraisan-davitra Nankasitraka ireo mpiara-miasa aminy ny Airtel
Miroborobo hatrany ny resaka fifandraisana eto amintsika. Zary lasa fiainan’ny olona mihitsy ny fampiasana finday na hiasana sy hiantsoana fianakaviana izany na koa hifandefasana vola.
Mitombo ireo minisitra tratry ny ampamoaka Misy tetika hoenti-mandemy an-dRajoelina ?
ankehitriny ny maneho fa tsy fifandrifian-javatra ny voalaza fa nialan’ny Minisitry ny fitsarana Atoa Imbiki Herilaza, ary eo ihany koa ny Sekretera Jeneraly lefitry ny Fiadidian’ny Repoblika Atoa Dina Andriamaholy izay nambaran’ny
Traboina any Befotaka Nalatsaka tamin’ny fiaramanidina ny fanampiana
Mbola misy hatreto ireo toerana saro-dàlana kanefa traboina, ka voatery amin’ny alalan’ny fiaramanidina no hanaterana ny fanampiana.
Kristianina mandinika raharaham-pirenena “Olona tena mahalala ny filam-bahoaka no ilaina”
Namerina hatrany ny Kristianina mandinika raharaham-pirenena, Ralaiarimanana, fa tsy misy afa-tsy ny fitodihana amin’Andriamanitra amin’izay rehetra atao ihany no mahatafavoaka eto amin’ity firenena ity.